VAHAOLANA: lehibe loatra ny mekanika fanosihosena amin'ny lavadrano - Ikkaro
firosoana >> fanamboarana >> Ahoana ny fomba fanamboarana mekanika fanangonam-boalavo iraisana mba hampiasaina amin'ny iray kely kokoa
Ahoana ny fomba fanamboarana mekanika fanangonam-boalavo iraisana mba hampiasaina amin'ny iray kely kokoa
Tonga miaraka amina fanamboarana aho. Zavatra tsy kasaina hatao taloha, fa saika. manana aho simba ny fomba famafazana ny fitoeran-drano. Ireto dia fanamboarana tena tsotra izay tsy mila fanazavana firy, esorinao ilay taloha, ividiananao ilay vaovao ary apetrakao ao.
Fa izany ve tsy misy maodely ho an'ny famorian-dranoko. Izy ireo dia habe iraisan'izao rehetra izao ary manana savaivony lehibe kokoa noho ny ilaiko. Satria izay ananantsika any an-trano dia maodely antitra sy antitra.
Ny olana amin'ny kabine
Ny olana, araka ny nolazaiko tetsy ambony, dia izay ny savaivon'ny fantson'ny mekanisma manerantany dia lehibe kokoa noho ny savaivon'ny lavaka famorian-drano mila mandalo izany.
Resaka milimetatra io fa tsy hitranga ary rehefa lasa tany Leroy Merlin sy any amin'ireo orinasa fantson-drano maromaro aho dia nilaza tamiko fa tsy manana zavatra kely kokoa izy ireo, fa mila manova ny lavaka famorian-drano aho na ny trano fidiovana iray manontolo.
Ary amin'ny maha kabine somary manokana azy dia nilaza ny vadiko fa raha manova ny kabine izahay dia hilentika koa io ary efa lasa avonavona izany.
Raha ny amiko, tsotra be, na dia tsy hitako aza ireo sombin-tadiaviko ary vitako ny hitako tao Leroy Merlin. Momba izany manaova fihenam-bidy amin'ny fantsona PVC.
Fantatro fa zavatra tena tsotra izany hoy aho ary toa miharihary nefa azoko antoka fa olona maro, miatrika an'io olana io, no manova ny trano fidiovana manontolo.
Nampitahako fantsona iray izay napetako tao anatin'ny fototr'ilay mekanika. Napetako tamin'ny lakaoly soldering PVC izy ary avy eo ny ampahany (volondavenona) izay mipoitra ary tsy maintsy lalovana dia napetrako tamin'ny Dremmel.
[asongadino] Raha ataonao mitovy amiko io dia jereo fa ny faritra misy kofehy fotsy rehetra dia ao anatin'ny lava-drano ary rano tsy mikoriana. Avo ny tankiko ary tsy manana olana aho, fa zahao izany ary raha te hampiasa rano bebe kokoa ianao dia tapaho ity faritra ity mba hanitsiana azy araka izay azo atao amin'ny faritry ny tatatra.
Manisy marika azy aho mba hahitanao azy mazava kokoa. Azonao atao ny manapaka ny marika misy loko mena ary amin'ity fomba ity dia hosorana miaraka amin'ny tanky ao anatiny.
Niryna ny ampahany izay mivoaka mba kofehy hahafahany manenjana tsara azy ary manamboatra azy, saingy satria tsy hitako izay notadiaviko ary tsy manana mpanonta 3D aho, dia nijanona ho hitanao eo amin'ny sary izany. . Ny kofehy ampiasaina hanamafisana no nanararaotako hitazona ilay mekanika avy ao anatiny.
Amin'ny farany Nataoko silily ny fanamafisana ary mila milaza aho fa tena tsara tokoa ary mandeha tsara.
[nasongadina] TOROHEVITRA BRICO: Aza mampiasa silikola izay efa tapitra mihoatra ny herintaona lasa izay. Tsy maina tsara izy ary mijanona ny paty miraikitra ary tsy maintsy nesoriko sy nadio aho. Ny rehetra amin'ny faniriana hampiasa indray: S [/ misongadina]
Amin'ny faran'ny zava-drehetra dia tsy maintsy ataontsika an-tsaina fa afaka mampiasa indray ny rafi-pitaterana eran'izao tontolo izao isika na dia tsy mamakivaky ilay lavaka ao anaty lavadrano aza izy ireo.
Ary ity no tantara iray manontolo. Raha misy manana hevitra hafa na misy mekanika manamarina ireo tranga ireo dia mametraha hevitra. Nandany ahy mihoatra ny 1 € monja ny fanamboarana azy.
Ary afa-po aho fa tsy mila manova kabine raha mbola tsara.